Podcast 8x32: Otu ọkà okwu nwere Siri maka June | Esi m mac
8 × 32 Podcast: Ọkà okwu na Siri maka June
Anyị nwere ọhụụ ọhụụ nke #podcastapple dị nke anyị na-akwụsị na nsonaazụ ego Apple mara ọkwa ụnyaahụ, gburugburu dị egwu nke inwe ngwaahịa Apple, ọnụahịa nke ngwa na Storelọ Ahịa ma ọ bụ ndozi Siri maka ụdị iOS nke na-esote. Anyị amaliteworị izu mbụ nke Mee ma ụbọchị ndị dị mkpa na-eru nso maka ụlọ ọrụ Cupertino na ndị ọrụ ya, nhọpụta mbụ dị nso na nke ahụ bụ na June 5 anyị nwere WWDC na San José.
Ma anyị ga-ahapụ ọdịnihu ma lekwasị anya anyị na nke ugbu a, yabụ anyị hapụrụ vidiyo nke pọdkastị ị ga-ahụ echekwa na ọwa Youtube ebe ndị ọrụ ibe anyị Nacho na Luis na-ekwu maka ihe ndị a kpọtụrụ aha na ọtụtụ ndị ọzọ:
Izu a, nke mbụ, ana m arịọ ndị na-ege anyị ntị na ndị ọrụ ọgụ anyị bụ Luis na Nacho, maka ịnọ naanị ha na nke a #podcastapple. Eziokwu bu na ha aruola oru di oke nma. Obi abụọ adịghị ya, n’izu na-abịa, anyị nwere olile anya na anyị agaghị enwe nsogbu oge ikpeazụ ma bụrụkwa otu anyị niile ịkọrọ gị akụkọ, echiche na ọchị ụfọdụ.
Younwere ike ibudata ihe omume kachasị ọhụrụ nke pọdkastị ozugbo anyị iTunes channel. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara akụkọ kachasị ọhụrụ ma ịchọrọ ka anyị nye gị aka, naanị ị ga-aga hashtag #podcastapple ma hapụ anyị echiche gị. Ndị otu otu dị iche iche ga-agba mbọ nyere gị aka dịka anyị nwere ike. I nwekwara ike iji hashtag na mgbasa ozi mmekọrịta zitere anyị ntụnye gị metụtara pọdkastị, ajụjụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » 8 × 32 Podcast: Ọkà okwu na Siri maka June
Bankslọ akụ ọhụrụ 22 sonyere Apple Pay na US na Australia
LG na-ewebata ihe ngosi 43-anụ ọhịa nwere atụmatụ dị egwu